Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Baili Medical Consumable
Guriga > Alaabta > Qalabka Isbitaalka > Alaabooyinka Caafimaadka
Isticmaalka Caafimaadku waa aaladaha la isticmaalo iyo qalabka loo isticmaalo ogaanshaha, daawaynta, daryeelka caafimaadka iyo baxnaanintu, iwm. Hadda, ma jiro si faahfaahsan oo loo kala saarayo alaabta caafimaadka ee Shiinaha.
Waqtigan xaadirka ah, ma jiro halbeeg kala-saar midaysan oo loogu talagalay Isticmaalka Caafimaadka ee Shiinaha. Marka hore, kormeerayaasha isbitaallada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxay u kala soocaan iyaga oo ku saleysan khibradooda shaqo. Marka labaad, marka loo eego soocidda heerka soo saaraha, heerka warshad kasta waa ka duwan yahay; Seddexaad, waxa loo kala saaray si waafaqsan shahaada diiwangelinta ee ay bixiyeen Maamulka Cunnada iyo Dawooyinka ee Gobolka iyo Maamulka Raashinka iyo Dawooyinka ee deegaanka. Afar, marka loo eego liiska kala-saarista ee sFDA, shaqaalaha cusbitaalka ee mas'uulka ka ah waxay ururin doonaan dhammaan magacyada badeecadaha ee diiwaangashan, ku darayaan khibrad shaqo oo shakhsi ah, magaca guud ee takhtarka alaabta, iyo magaca soo saaraha ee alaabta, iyo dib u kala sooc oo kood badeecadaha oo dhan. Alaabooyinka caafimaadku waa qayb aad muhiim u ah isbitaalada
Kaalmada Dhegoolaha Dijital ah
Dijital Deaf-aid waa megaphone yar, asalka ah ma maqli karo codka si uu u balaadhiyo, ka dibna isticmaalo maqalka haraaga ee dadka maqalka naafada ah, si codka loogu diro xarunta maqalka maskaxda, oo uu dareemo codka. Waxay inta badan ka kooban tahay makarafoon, cod-weyneeye, taleefoon dhegeed, sahay koronto iyo xakamaynta mugga. AIDS-ka maqalka waxa loo qaybiyaa AIDS maqalka hawo hago iyo AIDS maqalka lafaha hagayo iyadoo loo eegayo habka hagida; Marka loo eego isticmaalka kala-soocidda sanduuqa, muraayadaha, timaha timaha, dhabarka dhegta, dhegta, kanaalka dhegta, kanaalka dhegta qoto dheer nooca gargaarka maqalka.
Kursiga Musqusha oo laablaaban
Kursiga musqulaha ee laablaaban, waxay ka tirsan yihiin nooc ka mid ah qalabka nadaafadda ee goobta saadka dhismaha iyo alaabta bullaacadaha. Hirgelinta sifooyinka farsamo ee ugu muhiimsan ee qaabka utility waa in: in hirgelinta hadda jira s-qaabeeya dabinka sare furan, rakibi nadiifinta bolt ah, la mid ah bullaacadaha on hubinta rakibaadda afka ama nadiifinta afka siltation nadiif ah, fulinta siltation ka dib, user u isticmaali kartaa tan si tartiib ah u nadiifinta bolt-ku waa ku haboon yahay, dhakhso badan iyo carro caafimaad, mid dhaqaale iyo mid la taaban karo.
Budada La Tuuri karo Gacno-gashiyada Nitrile-ka Cad ee Bilaashka ah
Budada la tuuri karo oo cad oo bilaash ah galoofyada nitrile-ka caafimaadka waa galoofyada balaastiga ah ee la tuuri karo, kuwaas oo ah alaabta ugu dhaqsaha badan ee horumarinta warshadaha galoofyada ilaalinta. Shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bixiyeyaasha adeegga warshadaha cuntada ayaa aad u xiiseeya galoofyada PVC sababtoo ah way ku raaxaystaan ​​in la xidho oo way dabacsan yihiin in la isticmaalo. Kuma jiraan wax caato ah oo dabiici ah mana keenaan dareen-celin xasaasiyadeed.
Gloves-caafimaad bilaash ah oo budada ah
Gloves-ka caaga ah ee bilaashka ah ee budada ah waa galoofyada caaga ah ee la tuuri karo, kuwaas oo ah alaabta ugu dhaqsaha badan ee soo koraysa warshadaha galoofyada ilaalinta. Shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bixiyeyaasha adeegga warshadaha cuntada ayaa aad u xiiseeya galoofyada PVC sababtoo ah way ku raaxaystaan ​​in la xidho oo way dabacsan yihiin in la isticmaalo. Kuma jiraan wax caato ah oo dabiici ah mana keenaan dareen-celin xasaasiyadeed.
Gloves-ka Vinyl Medical waa galoofyada caaga ah ee la tuuri karo, kuwaas oo ah alaabooyinka ugu dhaqsaha badan ee soo koraya warshadaha galoofyada ilaalinta. Shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bixiyeyaasha adeegga warshadaha cuntada ayaa aad u xiiseeya galoofyada PVC sababtoo ah way ku raaxaystaan ​​in la xidho oo way dabacsan yihiin in la isticmaalo. Kuma jiraan wax caato ah oo dabiici ah mana keenaan dareen-celin xasaasiyadeed.
PVC budada galoofyada Vinyl ee caafimaadka bilaashka ah
Gacma-gashiyada Vinyl-ka-caafimaadka ee bilaashka ah ee PVC waa galoofyada caaga ah ee la tuuri karo, kuwaas oo ah alaabada ugu dhaqsaha badan horumarinta warshadaha galoofyada ilaalinta. Shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bixiyeyaasha adeegga warshadaha cuntada ayaa aad u xiiseeya galoofyada PVC sababtoo ah way ku raaxaystaan ​​in la xidho oo way dabacsan yihiin in la isticmaalo. Kuma jiraan wax caato ah oo dabiici ah mana keenaan dareen-celin xasaasiyadeed.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Alaabooyinka Caafimaadka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Alaabooyinka Caafimaadka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Alaabooyinka Caafimaadka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.